Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo, saka ruvoko rwavo rwerudyi chii?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo, saka ruvoko rwavo rwerudyi chii?
Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo, saka ruvoko rwavo rwerudyi chii?
Einstein anotsanangura chiedza munzira mbiri dzakasiyana zvikuru. Akati dzimwe nguva chinoita hunhu hwakafanana nemafungu. Zvino pane dzimwe nguva, achiita seanorwisa pfungwa yekutanga iyi, imwe tsananguro yake inotsanangura chiedza ndeyekuti chinoita sechinhu chakabatana chinoenda rutivi rumwechete. Asi ichi chaive chimwe chikamu chaimuita anoziva. Akagamuchira nemaoko maviri kuita kusingajairiki kwechiedza, akasarudza hunhu hunotsanangura nekugadzirisa dambudziko raanenge akatarisana naro panguva iyoyo zvakanaka.
Nhasi uno vefizikisi vose vanogamuchira kuita “kuviri” kwechiedza uku. Chiedza chinoita semafungu uye sechinhu chakabatana chinoenda rutivi rumwechete.
Dzimwe nguva vesainzi vanoona chiedza semafungu, semasai sai pamusoro pemvura anofamba achienda mativi ose.
Dzimwe nguva vanoona chiedza sechinhu chakabatana, sebara repfuti, rinoenda kurutivi rumwechete.
Hazvigoneki kwatiri kuti tinzwisise kuti chiedza chimwechete chingaite sei hunhu huviri hunorwisana. Asi chinodaro.
Ndeipi nzira yakanaka kuti tinzwisise kuti chiedza chinoita sei hunhu husingagoneki uhu? Kana mukafunga nezvechiedza semafungu, musafunge nezvacho sechinhu chakabatana. Zvino kana mukafunga nezvechiedza sechinhu chakabatana, musafunge nezvacho semafungu.
JOHANE 8:12 Zvino Jesu akataura zve navo, akati: Ndini Chiedza chenyika:
Kana Jesu ari chiedza chedu cheMweya zvino anokwanisawo kuratidzira hunhu hwatinoti haugoneki.
Dzimwe nguva anoita hunhu hweMunhu. Dzimwe nguva anoita saMwari.
Asi Mwari Mweya, Mwari haasi nyama nemapfupa.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya:
Saka Munhu, akaitwa nenyama nemapfupa, haangave Mwari.
JOHANE 20:28 Tomasi akapindura, akati kwaari; Ishe wangu naMwari wangu.
Asi Tomasi akamudaidza kuti Mwari.
Saka zvinhu zvinoita sezvisingagoneki izvi uye zvinokanganisa mafungiro zveMunhu naMwari zvakaitika sei?
Jesu akafamba pamusoro pemvura kuGarerea chinhu chisingagoni kuitwa nemunhu.
Jobo akataura pamusoro paMwari achiti:
JOBO 9:8 Iye oga unotatamura denga, unotsika pamusoro pemafungu egungwa
Mwari ega ndiye anokwanisa kufamba pamusoro pemvura. Saka Jesu zvisinei nekuva Munhu, anofanira kuva aivewo Mwari.
Kana muchiti hazvigoneki. Ndinokunzwirai tsitsi.
Asi zvinoitawo sezvisingagoneki kuti chiedza chiite sechinhu chakabatana chinoenda rutivi rumwechete, zvakare kuti chigone kuita hunhu hwemafungu anoita masai sai anoenda mativi ose. Asi chiedza chinoita izvi. Chiedza ndicho chakavanzika.
Ndizvo zvimwechete naMwari.
I TIMOTIO 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye wakaratidzwa panyama,
Zvino Jesu akaenda kumusoro Kudenga zviri nyore kwazvo achifamba mumhepo pazuva raakakwira Kudenga. Munhu haagoni kuita izvi.
II SAMUERI 22:11 Wakataswa kerubi, akabhururuka; Zvirokwazvo wakavonekwa ari pamapapiro emhepo.
Mwari anofamba zviri nyore mumhepo.
Zvakare, Munhu anoshamisa uyu, Jesu aiita hunhu hwakafanana nehwaMwari.
Jesu akabva amutsa Razaro kubva muguva rake. Mwari ega ndiye anokwanisa kupa hupenyu kuvakafa.
Zvakare Jesu akaita hunhu hwaMwari.
Akabva atora zvingwa zvishanu nehove mbiri kwaive kudya kwemumwe mwanakomana kwemasikati.
Chimwe chinhu chinoshamisa chakabva chaitika. Mumavoko ake chikafu ichi chakawanda, chikazadza nekuzadzazve matengu akatakurwa nevadzidzi vake, zvekuti vadzidzi vakakwanisa kupa chekudya kuvanhu zviuru zvishanu.
Kukwanisa kusika chikafu chakabikwa kare chakawandisa hazvigoni kuitwa nemunhu. Zvakare Munhu Jesu aive aita hunhu hwaMwari.
Chiedza, taona kuti chinoita zvose semafungu uye sechinhu chinoenda rutivi rumwechete- zvinoratidza chakavanzika chinoyananisa zvinhu zviviri zvinopikisana pamafungiro edu isu vanhu.
Saka Jesu, chiedza chenyika, ndiye kuyanana kwakavanzika kweMunhu naMwari.
I TIMOTIO 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye wakaratidzwa panyama.
Mwari ndiMweya. Saka Mweya wese wakagara muMuviri weMunhu Jesu.
JOHANE 5:19 Zvino Jesu akapindura, akati kwavari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Mwanakomana haagoni kuita chinhu oga, kana asingavoni baba vachichiita;
Baba ndiwo Mweya unoshamisa unogara muMuviri waJesu.
Mwanakomana ndiye Munhu maari munogara Mwari.
Kune chero munhu, mweya uri maari ndiwo unotonga maitiro ake uye mafungiro emuviri wake.
Jesu angaenzane sei naBaba vake, asi oti Baba vake vakuru kwaari?
VAFIRIPI 2:6 Iye kunyange akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndichinhu chinofanira kubatisiswa.
JOHANE 14:28 Nokuti Baba vakuru kwandiri.
Mweya wako nemuviri wako zvakaenzana nokuti zvese ndizvo zvinoita iwe.
Asi mweya wako, unoita pfungwa dzako, ndiwo mukuru unotonga muviri wako.
Bhaibheri rinotaura pamusoro paMwari Baba nekuti Mwari Mweya.
Bhaibheri harina kubvira rati “Mwari Mwanakomana.”
Mwanakomana Munhu wenyama nemapfupa maari ndimo munogara Mwari.
Asi Mwari haasi nyama nemapfupa. Saka Mwanakomana haakwanisi kuva Mwari.
Saka Bhaibheri rinoti “Mwanakomana waMwari”.
Ngatiedzei mamwe maonero. Mweya usingaoneki uri mauri ndiwo “baba” muviri wako unoonekwa ndiwo “mwanakomana” unoteerera mweya usingaoneki, unogara mauri. Pamusoro pazvose, mweya wako unotonga muviri wako woukurudzira kuti uite zvese zvaunoita.
Apa tava nedambudziko guru kana tichitaura pamusoro paMwari: Mwari haaoneke uye haabatiki.
JOHANE 1:18 Hakunomunhu wakatongovona Mwari; Mwari wakaberekwa ari mumwe woga, uri pachifuva chababa, ndiye wakamuzivisa isu.
Hatifi takagona kuona Mwari nokuti Mwari Mweya, maziso edu enyama nemidziyo yedu yese inoshandiswa kuita zvesainzi hazvigoni kuona mweya. Hamukwanisi kuona mweya wehupenyu uri mamuri.
JOHANE 5:37 Naivo Baba vakandituma, ndivo vakandipupurira vo. Hamuna kutongonzwa inzwi ravo, kana kuona mufananidzo wavo.
Mwari ndiMweya, haana mufananidzo watinokwanisa kuona.
Saka Mwari haakwanisi kuva neruvoko rwerudyi.
Rangarirai, Mwari akaratidzwa panyama. Mwari (Baba) waive Mweya unoshamisa usingavonekwe wairarama muMunhu wenyama Jesu, anodaidzwa kuti Mwanakomana waMwari. Hunhu hweMunhu uyu hwairatidza maitiro eMweya wairarama maari.
Munhu wenyama, watinoona kunze, aive pasi pehutongi hweMweya unoshamisa waigara maari.
Uyu aive muenzaniso wakanaka kwatiri isu tese kuti tirarame saye.
Mwari anoda kuti tizvarwe patsva apo anoisa chikamu cheMweya wake Mutsvene matiri, anobva ada kuti muviri wedu wose uzviwisire pakuita kuda kweMweya wake unenge ugere matiri.
MABASA 2:17 Mwari unoti: Namazuva okupedzisira, ndichadurura zvoMweya wangu pamusoro penyama yose:
I VAKORINTE 3:16 Ko hamuzivi here kuti muri tembere yaMwari, vuye kuti Mweya waMwari unogara mukati menyu here?
Chishamiso cheMweya waMwari ndechekuti unokwanisa kudurura kubva kudenga semvura inonaya, uye zvikamu zveMweya zvinokwanisa kupida mumwoyo yevatendi.
JEREMIA 23:24 Ko Ini handizadzi denga nenyika here? Ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Mweya waMwari usingavonekwe muMuviri weMwanakomana wake, asi uchizadza nyika yose, uye unokwanisa kuwanikwa mukati mevatsvene vake. Izvi zvinogoneka sei?
Murume uyu arikutaura nhau muimba yenhepenyuro yezvivhitivhiti.
Mufananidzo wake unotorwa muimba yenhepenyuro unoenda mativi mana. Masai-sai ezvivhitivhiti haaonekwe (seMweya waMwari) anopinda chero nepamadziro edzimba ozadza imba yose nenzvimbo dzose dzakavhurika.
Hapana chinokwanisa kuona masaisai aya- kunze kwekunge paine mudziyo unoagamuchira wakaita sechivhitivhiti.
Ipapo mufananidzo wemunhu anotaura nhau unobva wavonekwa pazvivhitivhiti zvose zvinoshanda.
Zvinoita sepane vanhu vashanu varipo. Asi pane munhu mumwechete, mutauri wenhau wamunotokwanisa kutaura naye kana kubatana maoko. Hamukwanisi kubatana maoko nevamwe vatauri vana vari pazvivhitivhiti. Munokwanisa chete kubata chiso chechivhitivhiti, kwete munhu.
Zvimwechete zvo Mwari anopa Mweya wake “kumunhu wese anoda” asi Mweya Mutsvene wake unokwanisa kutambirwa chete nemutendi ane moyo wakatendevuka. Ropa raMwari rinosuka moyo yedu kuti tive takachena “sezviso zvezvivhitivhiti zvinoshanda” kuti tiratidze nekuita zvinodiwa neMweya waMwari uri mukati medu.
Hongu ndati ropa raMwari.
Pauro, achitaura nevakuru paEfeso, akati:
MABASA 20:28 Zvichenjerei imi, neboka rose ramakaitirwa vatariri varo noMweya Mutsvene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neropa rake.
Zvakare tiri kuramba tichiona kuti Munhu noshamisa uyu anonzi Jesu mubatanidzwa wazvose munhu naMwari.
Vesainzi vaishuvira kuti chiedza chive semafungu, kana kuti chinhu chakabatana chete. Asi chikaita sezvinhu izvi zvose.
VAGARATIA 2:20 Ndakaroverwa pamuchinjiko pamwechete naKristu: handichini ndinorarama, asi Kristu unorarama mandiri:
VAROMA 8:10 Kana Kristu ari mukati menyu, muviri wakafa nokuda kwezvivi, asi mweya mupenyu nokuda kwokururama.
Mweya Mutsvene ndiwo Kristu anorarama matiri.
Kuna Ishe umwechete. Jesu ndiye Ishe. Uye Ishe uyu ndiye Mweya.
VAFIRIPI 2:11 Kuti ndimi dzese dzibvumire dziti, Jesu Kristu ndiyeShe,
II VAKORINTE 3:17 Ishe ndiMweya; zvino panoMweya waShe, panesununguko.
VAEFESO 4:5 Ishe mumwe
Hatigoni kuona Mwari nokuti iye ndiMweya usina mufananidzo.
Tinogona chete kuona Muviri unogara Mwari.
Ngatitarisei zvinorehwa nekutaura kwekuti “ruvoko rwaMwari rwerudyi”.
Uyu unofanira kuva uri mucherechedzo wakamiririra chimwe chinhu sezvo Mwari baba havana muviri, saka havangakwanisi kuva neruvoko.
Pagungwa dzvuku, vaEgipita vaive vachinyura, Mosesi achiimba:
EKSODO 15:6 Rudyi rwenyu, JEHOVA, rwakakudzwa nesimba rarwo; rudyi rwenyu, JEHOVA, runoputsanya vavengi.
God’s power was symbolized as a strong fist that had dealt the enemy a knockout blow. Simba raMwari raimiririrwa sechibhakera chaive charova nekukunda muvengi.
Mwari haana kuvonekwa pachiitiko ichi. Asi simba rake rinoshamisa rakavonekwa pakuparadzwa kukuru kwakaitika muvengi achinyura mumvura.
Kana tikaedza kuisa izvi mumufananidzo, tinokwanisa kuzvifananidza nechibhakera cheruvoko rerudyi rwemurwi runorova nekukurira waanorwa naye.
Ruvoko rwemunhu rwerudyi ndirwo chiratidzo chinonyatsonzwisisika chesimba rinenge rashandiswa.
MATEO 26:64 Jesu akati kwaari: Ndizvo zvawataura; asi ndinoti kwamuri, kubva zvino muchaona Mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, achivuya namakore okudenga.
Apa Jesu akaratidza pachena kuti ruvoko rwerudyi mucherechedzo wesimba.
RUKA 22:69 Asi kubva zvino Mwanakomana womunhu uchagara kurudyi rweSimba raMwari.
Simba rinoratidzwa naJesu harisi simba remunhu wenyama, sechibhakera chinodonhedza munhu, asi simba raMwari rinoshamisa, zvakafanana nezvakavonekwa naMosesi pamhenderekedzo dzeGungwa dzvuku.
VAHEBERU 1:3 Iye chadzera chokubwinya kwake, nomufananidzo wake chaiye, unochengeta zvinhu zvose nenzwi resimba rake, wakati apedzisa kunatswa kwezvivi, akagara kurudyi rwovumambo kudenga.
Mweya waMwari unoshamisa wairarama muMuviri wemunhu Jesu. Kuita kweMunhu Jesu kwairatidza kana kuonesa hunhu hwaMwari asingavonekwi aigara muMuviri wake.
Jesu aive Muranda, musevenzi, Chibairo, akauya kuzoyananisira zvivi zvedu.
Mushandi akakosha mukambani anodaidzwa kuti “munhu wekurudyi” kwemukuru wekambani.
Ruvoko rwerudyi rwemushandi ndirwo rwunomutendera kubata mabasa ake nehunyanzvi.
Kuisa mavoko edu akaneta muruvoko rwaMwari rworudyi itsananguro yakanakisa yekutsanangura kuti simba raMwari, kana tikagara neShoko rake rakanyorwa, rinogona kutiyambutsa mumatambudziko nemiyedzo yenyika ino.
Calvari raive simba rechokwadi. Apa ndipo pakakundwa zvivi naSatani.
ISAYA 49:16 Tarira, ndakakunyora pazvanza zvangu:
Zvipikiri zvaive pamavoko ake pamuchinjiko zvakanyora mazita edu pamavoko ake.
Jesu akagara “kurudyi” kana “simba” revumambo Kudenga. Hakuna kumwe kubwinya kunopfuvura uku.
Mambo zvinoreva Ishe. Jesu ndiShe wemadzishe.
ZVAKAZARURWA 19:16 Panguvo yake napachidzva chake pakanga pakanyorwa zita rinoti: MAMBO WAMADZIMAMBO, NASHE WAMADZISHE.
Saka Jesu ane simba rese saMambo wedenga napasi.
MATEO 28:18 Ipapo Jesu wakasvika, akataura kwavari akati: Ndakapiwa simba rose kudenga napanyika.
ZVAKAZARURWA 1:8 Ndini Arfa neOmega, ndizvo zvinoreva Ishe Mwari, uri’po, wakanga ari’po, nouchazova’po, wamasimba ose.
Ndiye Mwari wemasimba ose. Ane simba rose. Mazita edu akanyorwa muzvanza zvake.
Saka ramangwana redu rakajeka. Ruvoko rwake rwerudyi runomiririra simba rake guru. Simba rega ratiri naro mumavoko edu riripo apo tinomasimudza tichinamata.
I VATESARONIKA 5:17 Rambai muchinyengetera.
MaKristu mazhinji anofungira kuti Stefani akavona vuMwari hweVanhu vaviri Kudenga paakafa.
MABASA 7:55 Asi iye azere neMweya Mutsvene, akatarisa kudenga, akavona kubwinya kwaMwari, naJesu amire kuruvoko rworudyi rwaMwari.
56 Akati: Tarira ndinovona denga rakazarurwa; noMwanakomana womunhu amire kuruvoko rworudyi rwaMwari.
Mufananidzo uyu unoratidza vanhu vaviri, saka hapana humbowo hweTiriniti- inoti mune Vanhu vatatu muhuMwari. Uyu mufananidzo unoshandiswa neveJehovah Witnesses, nevamwewo, vanotenda kuti huMwari hune Vanhu vaviri.
Mufananidzo uyu unoita seunoratidza Vanhu vaviri. Hakuna Magwaro anoratidza vanhu vatatu. Saka veJehovah Witnesses vanowana zvibodzwa paMagwaro aya kana zvichienzaniswa nevanhu vanotenda kuTiriniti.
Asi kuva neVanhu vaviri muhuMwari kunorwisa mamwe Mamgwaro.
JOHANE 4: 24 Mwari ndiMweya:
JOHANE 1:18 Hakunomunhu wakatongovona Mwari;
JOHANE 5:37 Naivo Baba, vakandituma, ndivo vakandipupurira vo. Hamuna kutongonzwa inzwi ravo, kana kuona mufananidzo wavo.
Saka mufananidzo wandanyora waMwari Baba agere pachigaro chehushe wakatadzikwa nokuti Mwari haana mufananidzo.
ISAYA 43:11 Ini, iyeni, ndiJEHOVA, kunze kwangu hakunomumwe muponesi.
Hamugoni kuona Muponesi, Jesu, amire parutivi paMwari. Izvi hazvisi muMagwaro.
Saka Stefani akaona chii?
MABASA 7:55 Asi iye azere noMweya Mutsvene, akatarisa kudenga, akavona kubwinya kwaMwari, naJesu amire kuruvoko rworudyi rwaMwari.
Stefani akaona kubwinya kwaMwari. Ichi chaive chinhu chakavonekwa chakapenya kwazvo.
MATEO 26:64 Jesu akati kwaari: Ndizvo zvawataura; asi ndinoti kwamuri: Kubva zvino muchaona Mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, achivuya namakore okudenga.
RUKA 22:69 Asi kubva zvino Mwanakomana womunhu uchagara uchagara kurudyi rweSimba raMwari.
Ruvoko rwerudyi rwaMwari asina mufananidzo asingavonekwi (uyo sezvo ari Mweya haana ruvoko rwerudyi) ungori mucherechedzo wesimba rake rinoshamisa. Stefani aifa rufu rwairwadza. Aive muKristu wekutanga kutakwa nemabwe. Saka Mwari akamupa chiratidzo chake ari Kudenga, chairatidza kuti Jesu aive nesimba rese pamusoro pehupenyu uye rufu, zvakanaka kana zvakaipa. Kunyange zvaiita kunge zvinhu zvese zvaipa kuna Stefani, chiratidzo ichi chakamuratidza kuti Jesu aitonga zviitiko izvi zvose. Mweya waStefani waizokwanisa kuenda Kudenga, wozomutswa kubva kuvakafa makore 2 000 aizouya murumuko rwekutanga.
Chiratidzo chesimba ichi chaivepo kukurudzira Stefani kuti azive kuti Jesu aive nesimba rekumutsa vakafa. Saka kana Stefani akafa, Jesu aizomumutsa panguva yerumuko.
MABASA 7:56 Akati: Tarira ndinovona denga rakazarurwa; noMwanakomana womunhu amire kuruvoko rworudyi rwaMwari.
Jesu aive amire Kudenga pasimba rese rinoshamisa raMwari rinomupa simba pamusoro perufu, gehena uye guva. Stefani aive apererwa, asi aive akachengetedzeka.
Hakuna Simba raSatani rakakura kupfuura simba reruvoko rwaMwari “rwerudyi”.
Kubwinya kwaMwari uku kungaonekwepi?
II VAKORINTE 4:6 Nokuti Mwari, wakareva kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumoyo yedu, kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunovhenekwa pachiso chaJesu Kristu.
Kune chiedza chekubwiya chinopenya pachiso chaJesu Kristu.
Kubwinya kunoshamisa uku kunobva pahuvepo hwaMwari anoshamisa anogara muMuviri wake.
Saka Jesu Kristu ndiye chiso chaMwari. Mufananidzo waMwari asingavonekwi.
Achitaura pamusoro paJesu, Pauro akati:
VAHEBERU 1:3 Iye chadzera chokubwinya kwake, nomufananidzo wake chaiye,
Mwari akaita murairo wekuti hakuna munhu angaite mufananidzo waMwari, nekuti hapana angaugone.
REVITIKO 26:1 Musazviitira zvifananidzo, kana kuzvimutsira mufananidzo wakavezwa
Mwari ega ndiye akaita munhu anova mufananidzo wake. Uyu aive Munhu Jesu. Mwari aizogara mumufananidzo iwoyo.
Inotevera mifananidzo yakatadzikwa apo vanhu vaiedza kuita mifananidzo yaMwari. Mapegani nemaKristu, vanoita sevanofarira Mwari ari pamitumbi mitatu.
Mwari weTiriniti uyu ane mazita matatu akabva kuEgipita.
Chigaro chehushe chinomiririra humwari hwavo. Vanhu vatatu vachiita Mwari.
Iyi itiriniti inobva kumabvazuva. Misoro mitatu pamuviri mumwechete. Vatatu- mumwe.
Mufananidzo uyu wetiriniti yevatatu- mumumwe (misoro mitatu pamuviri wemunhu mumwechete) unobva kumaHindu kuIndia.
Mufananidzo unotevera unobva kumunyori wechiRoman Catholic.
Tarirai Mwari Baba akapfeka korona ine mitumbi mitatu yaPope. Asi muna 1963 Pope mutsva, Paul VI, akabvisa korona iyi mumashure mekugadzwa kwake haina kuzopfekwazve kubva ipapo. Saka mufananidzo waMwari uyu hauchareva chinhu.
Tiriniti inotevera inoshandiswa nevanopikisa chiCatholic. Inoratidza Mweya Mutsvene senjiva kwete munhu. Kufunga kwakadai uku kwakaita kuti veJehovah Witnesses, nevamwe vataure kuti mungori neVanhu vaviri chete muhuMwari. Mwari Baba neMwanakomana anova muduku kuna Mwari.
Mifungo yevanhu haizivi miganhu. Vanhu pavakatanga kunyora kana kuveza zvavanofunga pamusoro paMwari, zvese izvi nezvimwe zvakachenjera zvakaitwa nevanhu vakangwara.
Mifananidzo iyi yese nezvivezwa izvi zviri kupa mufananidzo usiriiwo waMwari nekuti Mwari haaonekwe uye haana muviri.
Asi Mwari anoshamisa akaita munhu wenyama, Jesu Christu, kuti kuzara kwovuMwari kugare maari. Jesu akatiratidza kuti Mwari angadai akadii dai aive Munhu.
JOHANE 14:9 Jesu akati kwaari: ndakava nemi nguva refu yakadai, ko hauzati wandiziva here Firipo? Wandivona ini wavona Baba, zvino unoreva seiko uchiti: Tiratidzei Baba?
Saka Jesu Kristu ndiye oga mufananidzo unovonekwa wakanakisa wekuratidzika kwaMwari.
Onai Jesu mupfungwa dzenyu. Nenzira iyi ndipo pamungaswedere padyo nekuziva kuti Mwari anoratidzika sei.
I JOHANE 5:20 Tinoziva kuti Mwanakomana waMwari wakavuya, akatipa kuziva, kuti tizive iye wazvokwadi; nesu tiri munaIye wazvokwadi, mumwanakomana wake, Jesu Kristu. Ndiye Mwari wazvokwadi, novupenyu bwusingaperi.
21 Vana vaduku, zvichenjerei pazvifananidzo.
Jesu Kristu ndiye Mwari wazvokwadi akaratidzwa mumuviri. Ndiye mudzikinuri wedu. Ndiye Mwari, asi ari zvakare Munhu. Nekuti Iye Munhu, anotinzwisisa isu vanhu. Akararama pamwechete nesu pano panyika. Semunhu pakati pedu anotida. Sekudawo kwatinoita vamwe vanhu, zvisinei nekutadza kwavo.
Mai vaJakobo naJohane vakakumbira chinhu ichi:
MATEO 20: 21 ... Rairai kuti vana vangu ava vaviri vagare, mumwe kuruvoko rwenyu rworudyi, mumwe kuruboshwe, muvushe bwenyu.
Jesu haana kubvira ati izvi hazvigoneke.
MATEO 20:23 .... Asi kugara kuruvoko rwangu rworudyi, nokuruboshwe, handizini ndinopa, asi ndezvavakazvigadzirirwa izvi naBaba vangu.
Saka kuchave nevanhu kuruboshwe kwake nekurudyi kwake muhushe.
Saka mufananidzo unotevera wehuMwari, unoratidza Jesu naMwari Baba, haugoneki:
Jesu haakwanisi kuva kurudyi kwaMwari Baba semunhu akazvimirira ega.
Ipapo Mwari Baba vanozogara panzvimbo iri kuruboshwe kwaJesu.
Saka mufananidzo wehushe hunouya waizova seunotevera:
Kunozova nenzvimbo yemunhu kurudyi kwaJesu chete.
Asi Jesu anoti nzvimbo kurudyi kana kuruboshwe kwake hadzisati dzapiwa vanhu.
Saka Mwari Baba vanogara seMweya usingavonekwe muMuviri wemunhu Jesu, uye magamba maviri emuBhaibheri anozogara umwe kurudyi umwe kuruboshwe kwake.
Jesu anowana simba rake kubva kuna Mwari anogara maari. “Rudyi” rweMweya usingavonekwe ndiro simba iri.
Asi Jesu, seMunhu, ane mavoko maviri. Saka vanhu vaviri vanogona kugara mumativi ake ose ari maviri.
Simba redu remweya rechokwadi rinobva chete kuMweya waMwari uri matiri.